I-Smartcut | Isilimela 2022
Iindidi ezili-17 zomsebenzi okwi-Intanethi eMisebenzini yaseKhaya ehlawulwa ngokwenene
Jonga lo msebenzi we-Intanethi u-17 kwimisebenzi yasekhaya eyonwabisayo, eguqukayo kwaye ihlawule ngokwenyani. Qala ishishini lakho kwi-Intanethi okanye ube ngumntu osebenza yedwa ohlawulelwa kakuhle namhlanje.
Imisebenzi emnandi engama-20 yaBantu abaNgahambelaniyo (Ayinamsebenzi into yokuba Mdala kangakanani)
Ukuba unokwenza nantoni na, ingaba yintoni? Yamkela isibindi, wena, kunye entsha. Fumana ezinye iindlela ezingalindelekanga, zasendle, eziphambeneyo, neendlela ezingahambelaniyo zokuphila ngale misebenzi ingama-20 ikhethekileyo kwaye ipholile.
Iindlela ezi-7 ezilula zokuphucula ukujonga kwakho iinkcukacha
Ilungu ngalinye leqela kufuneka liqwalasele iinkcukacha ukuze lihambise inaliti kumbutho omkhulu. Nazi ezinye iingcebiso zokuba unomdla ngakumbi kwiinkcukacha eziza kukwenza ube ngumntu onemveliso ngakumbi.
Uninzi lwabanini-mashishini abaphumeleleyo (kunye nokufunda kubo)
Kuthatha ntoni ukuze ube ngusomashishini ophumeleleyo? Nanga amabali ali-10 osomashishini abaphumeleleyo. Funda kumabali abo kwaye uzixhobise ngezakhono ezifanelekileyo ukuze ube ngusomashishini omkhulu.
Iimpawu ezibalulekileyo zobuqu ezijongwa ngabaqeshi
Izakhono zobungcali zibalulekile ekufumaneni amathuba emisebenzi kodwa iimpawu zakho zibalulekile nazo. Nazi iimpawu ezili-18 ezenziwa ngabaqeshi:
Ngaba Ngaba Ufanele Uyeke Umsebenzi Wakho Ngaphandle Komnye Umsebenzi?
Ngaba ungawuyeka umsebenzi wakho ungenawo omnye umsebenzi? Isenokungabi lula. Kodwa ngokucwangcisa kwangaphambili, uya kukulungela ngakumbi ukwenza ukhetho olulungele wena.
Ama-50 aBaphembeleli abalandelayo ukuba bawalandele, akunamsebenzi kushishino lwakho
Ngezigidi zabasebenzisi be-LinkedIn, unxibelelana nabani xa kuziwa kubunkokeli, ukuthengisa, ukuvelisa, kunye neengcebiso ngamakhondo omsebenzi? Naba abantu abangama-50 abakhulu kwi-Linkedin abaneempembelelo ezinkulu.
Ungalu-Ace njani udliwanondlebe: Ukubethelela eyona mibuzo ilukhuni
Ngaba ufuna ukufumana umsebenzi wephupha lakho? Nantsi indlela yokwenza udliwanondlebe ngobuchule bokufumana iimpendulo zemibuzo elishumi enzima yodliwanondlebe.
Ngaba Ndifanele Ndiwuyeke Umsebenzi Wam Ukuba Iyandenza Ndingonwabi Kodwa Ndihlawule Kakuhle?
'Ngaba ndifanele ndiyeke umsebenzi ukuba uyandonwabisa?' Lo ngumbuzo oqhelekileyo ubuzwa kwaye kunokubonakala ngathi yeyona nto yoyikekayo, kodwa kukho izizathu ezizizo zokuba kutheni kufuneka uyeke umsebenzi.
I-10 yeeKhibhodi zoMatshini eziBalaseleyo zokuChwetheza ngokukhawuleza
Ngaba ujonge ikhibhodi efanelekileyo eya kukunceda uchwetheze ngokukhawuleza? Nazi i-10 zezona zitshixo zibalaseleyo onokukhetha kuzo.
Iindlela ezili-10 zokwakha ubudlelwane obuLungileyo kunye nobusebenzayo
Ngaba uyafuna ukwakha ubudlelwane obuqinisekileyo bokusebenza kunye noogxa bakho? Ezi ndlela zilishumi ziya kukunceda ube lilungu leqela elingcono kwaye wenze abahlobo abalungileyo emsebenzini.
Eyona mibuzo ilungileyo yokucela udliwanondlebe ukubuza abasebenzi
Imibuzo elungileyo inokunika ukuqonda okukhulu kwixabiso umqeshwa anokuzisa inkampani yakho. Nazi imibuzo ezili-15 ezilungileyo zodliwanondlebe oza kubuza umqeshwa ngexesha lodliwanondlebe.
Ungabuphucula njani ubuchule beKhompyuter yakho ukuze ubuhambele phambili kwikhondo lomsebenzi wakho
Musa ukuhlala phantsi uzisole ngomsebenzi; funda eli nqaku kwaye wazi ukuba yintoni kwaye ungasebenza njani kubuchule bekhompyuter yakho kwikhondo eliyimpumelelo elizayo.
Ungayibuyisa njani ngokuBabayo emva kokuGxothwa
Wothuswa kukungothuswa kukuphulukana nomsebenzi kwaye ungaqinisekanga ukuba ubuyela njani kumkhondo? Sikunika iindlela ezili-10 ezilula zokukunceda ukuba ubuye umva kamnandi emva kokugxothwa.
Izakhono ezi-20 eziBalulekileyo zokongeza kwi-Resume (yazo zonke iintlobo zemisebenzi)
Qalisa kwakhona ngokuchaza izakhono zakho ezibalulekileyo ngendlela enyanzela umphathi wokuqesha ukuba afune ukudibana nawe. Nazi izakhono ezibalulekileyo zokongeza ukuqala kwakhona kunye neengcebiso zokubulala zokunceda umhlaba umsebenzi wakho wamaphupha.
Ungakwenza njani ngakumbi ukuSebenza ngokuSebenza: Imiqobo kunye neengcebiso
Ukuze ube ngumntu ojolise ekusebenzeni, kuya kufuneka ukhuthele kwaye ungazenzi. Eli nqaku liza kukunceda ube ngumntu ojolise kumanyathelo.
Ungawushiya njani umsebenzi wakho owuthiyileyo kwaye uqalise ukwenza into oyithandayo
Sinobomi obunye bokuphila ke kutheni ungenzi into oyithandayo kunye noko ukhululekile ukukwenza? Nantsi indlela yokuyeka umsebenzi kwaye uphilele wena.
I-17 Izakhono zomsebenzi eziSebenzayo eziya kukuZisela amaThuba amaNqanaba oMsebenzi
Ngaba ufuna ukubethelela umsebenzi wephupha kodwa ungazi ukuba wenzeni? Fumanisa iimpawu zakho eziphambili kunye nezakhono zomsebenzi eziya kuqinisekisa impumelelo yakho xa ufaka isicelo semisebenzi.
Unxiba njani ukuze uphumelele ngelixa usebenza nohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo
Umsebenzi omtsha? Hayi imali eninzi? Awudingi ukuchitha imali eninzi ukunxiba ngokufanelekileyo umsebenzi. Fumana iingcebiso apha zendlela onxiba ngayo ukuze uphumelele kuhlahlo-lwabiwo mali.
I-Book-Street Smart yiNew Sexy
Kuxhomekeka kwindlela ofunda ngayo, unokufumanisa ukuba unobukrelekrele ngakumbi kwincwadi okanye ubuhlakani basesitratweni. Funda ngendlela yokusebenzisa ezi mpawu zintle zombini.